Mushaharka Ciyaartoyda Manchester United Ee Kaddib Heshiiska – Axadle
Mushaharka Ciyaartoyda Manchester United Ee Kaddib Heshiiska
By Abdiwahab Ahmed	 On Oct 4, 2020
Manchester United ayaa heshiis laba sannadood ah la gaadhay weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani oo si bilaash ah ay kula soo saxeexatay kaddib markii uu si xor ah uga tegay PSG.
Cavani ayaa la sheegay in toddobaadkii uu mushahar ahaan u qaadan doono lacag dhan £174,000 Gini, taas oo ka dhigaysa inuu ka mid noqonayo laacibiinta meelaha dhexe kaga jira liiska mushaharka ciyaartoyda Manchester United.
Kooxaha Benfica iyo Ateltico Madrid ayaa raadinayay weeraryahankan 33 jirka ah, laakiin waxa burburay wada-hadalladii ay isku dayayeen inay kula soo saxeexdaani illaa Manchester United ay ku guuleysatay heshiiskiisa.
David de Gea ayaa ah ciyaartoyga ugu mushaharka badan Manchester United waqtigan, waxaanu usbuucii u xaadiraa lacag dhan £350,000 Gini, waxaana kaalinta labaad fadhiya Paul Pogba oo £290,000 Gini mushaharkiisa toddobaadlaha ahi yahay, halka saddexaadna uu fadhiyo Anthony Martial oo £250,000 Gini qaata usbuucii.
Labada ciyaartoy ee reer England ee Marcus Rashfrod iyo Harry Maguire ayaa shanta kaalmood ee ugu sarreeya dhamaystira, waxaana mid walba uu toddobaadkii qaataa £200,000 Gini iyo £189,000 Gini, sida ay u kala horreeyaan.
Edinson Cavani ayaa kaalinta lixaad soo cidhiidhsanaya, waxaanu qaadan doonaa mushahar dhan £174,000 Gini toddobaadkii, taas oo sannadkiina noqon doonta £9 milyan oo Gini.
Halkan kaga bogo mushaharka ciyaartoyda Man United ee kaddib heshiiska Edinson Cavani:
David De Gea – £19.5 million – £350,000
Paul Pogba – £15 million – £290,000
Anthony Martial – £13 million – £250,000
Marcus Rashford – £10.4 million – £200,000
Harry Maguire – £9.8 million – £189,000
Edinson Cavani – £9 million – £174,000
Juan Mata – £8.3 million – £160,000
Luke Shaw – £7.8 million – £150,000
Odion Ighalo – £6.5 million – £125,000
Fred – £6.2 million – £120,000
Victor Lindelof – £6.2 million – £120,000
Nemanja Matic – – £6.2 million – £120,000
Bruno Fernandes – £5.1 million – £100,000
Dean Henderson – £5.1 million – £100,000
Aaron Wan-Bissaka – £4.6 million – £90,000
Scott McTominay – £60,000 usbuucii
Mason Greenwood – £40,000 – usbuucii
QM oo walaac ka muujisay Xuquuqul Insaanka Soomaaliya & DFS
Arsenal Oo Xiddig Chelsea Lasoo Saxaaxanaysa, Man United Oo